Dooda madaxda xisbiyada baarlamaanka | Somaliska
Maanta waxaa baarlamaanka Sweden ka dhacday dood xiiso leh oo dhex martay madaxda xisbiyada Baarlamaanka sida gudoomiya xisbga Social Demokraterna Mona Sahlin oo shaqada ka tageysa bisha Maarso, sidoo kale waxaa dooda ka qeyb galay raysal wasaaraha Sweden Fredrik Reinfeldt iyo Gudoomiya xisbiga cunsuriga ee SD Jimmie Åkesson. Mona Sahlin ayaa hadal dheer goobta ka jeedisay ayadoo weerar ku qaaday xisbiga SD. Waxay ka codsatay xisbiyada kale in ay wadashaqeeyaan si loo go'doomiyo xisbiga "cunsuriga" SD. Gudoomiya xisbiga SD ayaa asna weerar ku qaaday Mona Sahlin asasgoo sheegay in ay xisbiga SD u tahay tusaale fashilka ku yimid isdhexgalka dhaqamada kala duwan. Ka dib waxaa goobta ka hadlay afhayeenka xisbiga Deegaanka (Miljöpartiet) Wetterstrand oo sheegtay in Sweden ay ka fogaato in ay noqoto sida Denmark oo aan laga ogoleyn in dadka Danishka ah iyo dadka soo galootiga ay is guursadaan ayadoo ula jeeday in haddii SD ay saameyn yeeshaan ay Sweden noqon doonto sida Denmark. Xisbiga Deegaanka ayaa hore u balan qaaday in ay Raysal wasaaraha ku taageerayaan wixii la xiriira arimaha soo galootiga si loo wiiqo saameynta SD. Dhinaca kale goobta waxaa ka hadlay raysal wasaaraha oo u mahadceliyay Mona Sahlin asagoo gudoon siiyay hadiyad moobeelka Iphone-ka. Mona Sahlin ayaa iska casishay gudoomiyenimada Xisbiga Social Demokraterna ka dib markii ay ku fashilmeen doorashadii sanadkii la soo dhaafay ayadoo shaqada ka tagi doonta bisha Maarso ee sanadkaan. Sidoo kale waxaa shaqada ka tagaya sanadkaan Gudoomiya xisbiga Miljöpartiet Peter Eriksson iyo afhayeenka oo waqtigoodii ka dhamaaday.
Maanta waxaa baarlamaanka Sweden ka dhacday dood xiiso leh oo dhex martay madaxda xisbiyada Baarlamaanka sida gudoomiya xisbga Social Demokraterna Mona Sahlin oo shaqada ka tageysa bisha Maarso, sidoo kale waxaa dooda ka qeyb galay raysal wasaaraha Sweden Fredrik Reinfeldt iyo Gudoomiya xisbiga cunsuriga ee SD Jimmie Åkesson.
Mona Sahlin ayaa hadal dheer goobta ka jeedisay ayadoo weerar ku qaaday xisbiga SD. Waxay ka codsatay xisbiyada kale in ay wadashaqeeyaan si loo go’doomiyo xisbiga “cunsuriga” SD.
Gudoomiya xisbiga SD ayaa asna weerar ku qaaday Mona Sahlin asasgoo sheegay in ay xisbiga SD u tahay tusaale fashilka ku yimid isdhexgalka dhaqamada kala duwan.
Ka dib waxaa goobta ka hadlay afhayeenka xisbiga Deegaanka (Miljöpartiet) Wetterstrand oo sheegtay in Sweden ay ka fogaato in ay noqoto sida Denmark oo aan laga ogoleyn in dadka Danishka ah iyo dadka soo galootiga ay is guursadaan ayadoo ula jeeday in haddii SD ay saameyn yeeshaan ay Sweden noqon doonto sida Denmark.
Xisbiga Deegaanka ayaa hore u balan qaaday in ay Raysal wasaaraha ku taageerayaan wixii la xiriira arimaha soo galootiga si loo wiiqo saameynta SD.
Dhinaca kale goobta waxaa ka hadlay raysal wasaaraha oo u mahadceliyay Mona Sahlin asagoo gudoon siiyay hadiyad moobeelka Iphone-ka.
Mona Sahlin ayaa iska casishay gudoomiyenimada Xisbiga Social Demokraterna ka dib markii ay ku fashilmeen doorashadii sanadkii la soo dhaafay ayadoo shaqada ka tagi doonta bisha Maarso ee sanadkaan. Sidoo kale waxaa shaqada ka tagaya sanadkaan Gudoomiya xisbiga Miljöpartiet Peter Eriksson iyo afhayeenka oo waqtigoodii ka dhamaaday.